कति खानु पारिको, खाऊँ आफ्नै बारीको
कति खानु पारिको, खाऊँ आफ्नै बारीको जुम्लाको स्याउ कतारमा
दिनेश गौतम काठमाडाैं, २४ भदाै
नयाँ बानेश्वरको संसद् भवनअगाडिको बाटिकामा एउटा ब्यानर टाँगिएको थियो । उक्त ब्यानरमा लेखिएको ‘कति खानु पारिको, खाऊँ आफ्नै बारीको !’ क्याच लाइनले सबैलाई तानेको थियो ।
जुम्लाको स्याउ प्रवर्द्धन गर्ने उद्देश्यले सोमबार साँझ कार्यक्रमको आयोजना गरिएको थियो । कार्यक्रमको प्रमुख अतिथि थिए, कर्णाली प्रदेशका मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाही । कार्यक्रममा उपस्थित सबैलाई जुम्लाको स्याउ चाख्ने व्यवस्था पनि थियो । साथै, किन्नेका लागि अफर पनि ।
कति हो दिदी १ किलो स्याउको मूल्य ?
१ सय ८०, लाने हो भाइ ?
मुख्य मन्त्री निर्धारित समयभन्दा ढिला आउने सूचना आयो । अनि नयाँ बानेश्वर चोकमा स्याउको मूल्य बुझ्न निस्किएँ । चोकमा रहेको एक फलफूल पसलमा छिरें ।
कति हो दाइ स्याउ किलोको ?
इन्डियन स्याउको २ सय ८० चिनियाँ स्याउको ३ सय ।
जहाँ १८० प्रतिकिलोमा जुम्लाको स्याउ विक्री भइरहेको छ । त्यहाँ कसैलाई चासो छैन । तर, नेपाली उपभोक्ता विदेशी विषादी मिसिएको स्याउ किन्ने भीडमै मिसिएका छन् ।
महँगोमा विदेशी स्याउ किन्ने नेपालीलाई के भन्ने ? मनमनै आफैंले आफैंलाई प्रश्न गरें । अनि फर्किएँ कार्यक्रममै । बोल्दै थिए जुम्लाका कृषक महेन्द्रराज खत्री ।
‘जुम्लामा ६१ हजार मेट्रिकटन स्याउ उत्पादन हुन्छ, नेपाली स्याउको बजार छैन । किनेर खाने उपभोक्ता छैनन् । तर, विषादी मिसिएको विदेशी स्याउ नै उपभोग गर्ने उपभोक्तालाई के भन्ने ? हाम्रो स्याउले बजार कहिले पाउँछ ?’ उनले प्रश्न गरे मुख्य मन्त्री शाहीलाई ।
‘स्याउ ढुवानी गर्न समस्या छ । सडक छैन । प्याकिङको व्यवस्था छैन । कोल्ड स्टोर छैन । टिपेको केही समयमै स्याउ बिग्रिन्छ । कृषकले उत्पादन गरेको स्याउ बारीमै कुहिन्छ । कृषकको समस्या समाधान कहिले हुन्छ ? उनले एकपछि अर्को प्रश्न मुख्य मन्त्रीलाई तेस्र्याए ।
त्यसपछि बोले मुख्यमन्त्री शाही, ‘कर्णाली प्रदेशलाई कृषिमा आत्मनिर्भर बनाउने हो, प्रदेश सकारले कर्णालीलाई अग्र्यानिक प्रदेश बनाउँछ ।’ प्रदेशलाई आत्मनिर्भर बनाएर अन्य प्रदेशमा समेत कर्णालीमा उत्पादित कृषि वस्तु निर्यात गर्ने योजना रहेको उनले सुनाए ।
‘काठमाडौंमा जुम्लाको स्याउ भनेर विदेशी स्याउ विक्रीवितरण भइरहेको छ,’ मुख्य मन्त्री शाहीले भने, ‘जुम्लाको स्याउको बजारीकरण गर्न प्रदेश सरकार लागिपर्छ ।’
नौ धारी स्याउ तथा फलफूल उद्योग, मेट्रो तरकारी, खर्पन ट्रेडिसन एक्सिलेन्स, कृषि फ्रेस, किसानको पसल, स्मार्ट एग्रिकल्चरले संयुक्त रूपमा जुम्लाको स्याउ प्रवद्र्धन गर्दै आएका छन् ।
जुम्लाको स्याउ कतारमा
जुम्लाको स्याउले कतारमा समेत बजार पाएको छ । मेट्रो तरकारी र नौ धारी स्याउ तथा फलफूल उद्योगको सहकार्यमा समन इन्टरनेसनलले स्याउ कतार पुर्याएको हो ।
कतारको सफारी मलमा जुम्लाको स्याउ विक्री वितरण हुन्छ । हप्तामा दुई पटक जुम्लाको स्याउ निर्यात गरिने मेट्रो तरकारीका संस्थापक अनिल बस्नेतले जानकारी दिए ।
‘जुम्लाको स्याउले कतारमा बजार पाएको छ,’ उनले भने, ‘अहिले हप्ताको दुई दिन निर्यात गरेका छौं, केही समयपछि अझै निर्यात बढाउँछौं ।’
प्रकाशित मिति: बुधबार, भदौ २५, २०७६, ०६:१०:००